Mara na I nwere obi uto mgbe ... | Martech Zone
Mara na I Nwere Ọ Sụ Mgbe…
Know mara na ị bụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi hippy (ọchị), mgbe:
ị bido ma ọ bụ banye mkpesa iji kwụsị nzaghachi akpaaka TwitterNke na-agaghị eme ihe ọ bụla iji kwụsị nzaghachi Twitter.
Na-eche na ị na-enyefe blog ụlọ ọrụ gị ụfọdụ mmebi iwu nke ịde blọgụ.
Ị chere ụlọ ọrụ na-emepe emepe agwa na saịtị mgbasa ozi iji zụọ ngwaahịa ha bụ atụmatụ dara ada, ọbụlagodi mgbe ọ na - ebute ahịa na ikpughewanye.
Ị chere blọọgụ ekwesịghị inwe mgbasa ozi, njikọ akwụ ụgwọ, ma ọ bụ nke nkwado na ndị na-ede blọgụ kwesịrị ime nyocha ha niile wee dee amara na ederede site na ịdị mma nke obi ha.
(Tupu ị gawa ikwu, gbaa mbọ gụọ akụkụ ikpeazụ nke post a!)
M hụrụ ọnụ ọchị n'anya, achọla mhie ụzọ. Ọ ga-amasị m ịbụ otu ụbọchị - mgbe m chekwaara ego zuru ezu iji zụta ala n'ugwu (yana satịlaịtị dị na satịlaịtị) na ụzọ ole na ole nke patchouli. Ma, ka ọ dị ugbu a, ọ dị m mkpa ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ.
A na-akwụ ụgwọ ụgwọ m mgbe ụlọ ọrụ nwere ọhụụ na obi ike iji jiri ndị na-ajụ ase na-eme ka ROI dị mma na afọ ojuju ndị ahịa karịa oge ọ bụla n'oge gara aga. Ana m enyere ha aka ime nke ahụ, agaghị m arịọ mgbaghara maka ya.
Twitter dị ka Ọkara ahịa
Guy kawasaki gwara Robert Scoble na Twitter nwere ike ịbụ ngwa ọrụ PR kachasị ukwuu n’akụkọ ihe mere eme. Twitter na-agbanwe.
N'ajụjụ ọnụ ndị na-adịbeghị anya, onye nchoputa Evan Williams ekwuola na ọ na-enwekwu obi ụtọ banyere ohere nke Twitter dị ka onye ahịa ahịa karịa karịa usoro mmekọrịta. Twitter na-eme ihe ego na ihe ịga nke ọma. Were nke ahụ amụmụ ọnụ ọchị!
Twitter bụ dabere na ikike ahịa ahịa. Ya mere, ọ na-enye a ohere zuru oke maka ụlọ ọrụ iji zụọ onwe ha ka ha si eche na ha dị irè. Site na akpaghị aka na-azaghachi via Tweetlater na akpaaka-ikenye blọgụ m na Ikwusa ozi, Emeela m ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha m na blog site na 5% ma mụbaa ndị na - agụ akwụkwọ kwa ụbọchị (sitere na Twitter) site na 8% na nkezi.
If ị họrọ soro m, ị na-apụ apụ na-enye m ikike ka m gwa gị okwu. Ewela iwe mgbe m mere. Ihe mbụ ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ime bụ buru ibu na nkwanye aka ahụ ma zaghachi ya ozugbo ji ihe di nma. Ọ bụrụ na ị masịghị ya? Na-esote! Ọ dị mfe.
Smippies kwesịrị inwekwu obi anụrị, ọ bụghị iwe iwe karịa gbasara azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta. Popups na ahịa intrusion ndị ọzọ na-agbada n'ime ọdịda anyanwụ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ na-agbanwe ma na-achọ ịchọta ma jikọọ na ndị na-azụ ahịa ebe onye na-azụ ahịa nọ - ọ bụghị site na ịdọrọ ndị ahịa na-agbapụ na iti mkpu na ha.
Enginechọ Ngini Nchọpụta bụ nnukwu ihe atụ nke a. Blogde blọgụ na-aghọ ihe mmega ahụ dị mkpa maka ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ ụzọ pụtara ìhè nke nnabata na nnweta. Ndị ahịa dị na njin ọchụchọ - nke ahụ bụ ebe ụlọ ọrụ kwesịrị ịdị!
Mgbe Companlọ Ọrụ Rụọ Ọrụ!
Yabụ ị gụchara ihe niile, ị ga - echerịrị na m bụ nnukwu ezì nnukwu ego na - adụ ụlọ ọrụ ọdụ ka ha jiri usoro ọ bụla ọ nwere ike ịgbanwe, megharịa, ree ma ree, ree, ree.
Ọ bụghị ikpe.
Ihe mara mma banyere mgbasa ozi mgbasa ozi bụ na ọ na-emezi egwuregwu egwu. Ndị ụlọ ọrụ na-anwa ịmegbu onye na-ajụ ase ga-ada naanị, ihere ga-eme ha. Njipu na mmegbu nke Twitter, Blogde blọgụ na Social Media na-ezute na ntaramahụhụ na-egbu mgbu na ngwa ngwa… ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọdachi niile.
Nke ahụ dị mma maka mmadụ niile! Ntinye gụnyere.
Interspire Na-akpali Mmasị Email Marketing
Bloke Blog - Inyere gi aka ka idi nma Blogger
Dee 27, 2008 na 9: 02 AM
Hmm .. Echetara m na ọ dịbeghị anya mgbe Kawasaki bụ naanị blogger ọhụrụ ma tụọ aro na ọ dị mma iji spam. Ekwesịrị m inye ya ntakịrị okwu ụja na ọbụlagodi Dave Winer kwetara m na nke ahụ. 🙂
Anyhow, Merry Christmas Dougy. Nwere ezi ihe na ihe kachasị mma maka ezinụlọ gị!
Dec 27, 2008 na 12:57 PM
Hey Bloke! Ka ekeresimesi oma gi.
Spam abụghị ikike na-adabere na ikike, ọ bụ ezie!
Dec 27, 2008 na 3:15 PM
Hụrụ post a n'anya! O mere m LOL.
Ka m bidoro ịza, ọ mere ka m chee echiche karịa, yabụ m mechara ziga nzaghachi na blọgụ m: http://www.afhill.com/blog. N’ezie enwere obi ụtọ n’ebe ahụ, ma yikarịrị ka ọ ga-adị. Mana otutu anyi choro ka anyi buru ndi n'echere anya - ndi choro uzo abuo nke ndi mmadu: onye onwe ya na onye okacha amara.
Dec 28, 2008 na 4:17 PM
N'ezie soro Andrea gafere ebe a site na post ya banyere post gị (echekwara m na m ga-atụgharị ya, kwa).
Maa gụọ m (yana Network anyị) n'ime igwe mmadụ Smippy. Agbanyeghị, dị ka ọkwa gị gosipụtara, ịde blọgụ nke nwere ọgụgụ isi na dịka ezigbo mmadụ na-etinye otu n'ime ngalaba Smippy na "Smullets" (otito nke Andrea) 🙂
Gingde blọgụ bụ n'ezie "akpaka" ozugbo ị gafere ihe ntinye (n'aka) nke ihe ị na-ebu. Echere m na blọọgụ ndị na-achụ m obere iwe bụ ndị ebe aka mmadụ zutere ya ka a na-edozi ya.
I nwere ike ịmata ihe dị iche 🙂
N'ụzọ dị oke egwu, Twitter yiri ka ọ bụ isiokwu na-atụ egwu nye m taa - ma na ozi ịntanetị na posts. Anyị ekpuchigola ya na mbụ, ma jiri ya, mana ọ dị ka ịmụ okwu ọhụrụ… enwere ihe kpatara ihe na - apụta ọzọ (yabụ na ume ọhụrụ nke Twitter dị n'usoro, ma ọ bụ na mbara igwe dị ka ọ na-agwa m).
Oh, na btw, ezumike na ugwu na njikọ satellite na-ada m nke ukwuu, kwa!
Dee 29, 2008 na 1: 08 AM
Smippy, Smulets… Nke a na-ato m ochi! Do na-eme ezigbo ihe gbasara etu a ga-esi mee ka ọchị ọchị a bụrụ nke m na-anụ… .. wepu ihe niile belụsọ isiokwu ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ okporo ụzọ site na etiti ahụ, ị ​​ga - enwe ụfọdụ mgbịrịgba na mkpịsị ụkwụ ka ha wee lelee blọọgụ gị.
Agbanyeghị, m nọ n'oké ọhịa, hụ ya n'anya, mana m ka nwere ego ịkwụ. 🙁
Dec 29, 2008 na 4:41 PM
Nnukwu post Doug, A SMIPPY! Ahụrụ m ya n'anya.
E bu n'uche teknụzụ ịrụ ọrụ maka gị. Mee ka ọ na-arụ ọrụ!
Feb 4, 2009 n’elekere 9:29 nke abali
Enwere m mmasị ịbịa na mkparịta ụka na-akpali mkparịta ụka nke m tụfuru. Doug, enwere m ekele maka nghọta nke ị na-enye na ahụmịhe gị onwe gị. Ọ na-agbakwunye ọkwa maka nkwenye gị ma na-enye ndị mmadụ (dị ka m) ihe nketa na akụkọ dị mkpa.
Ugbu a, m ga-eme ọsọ ọsọ were Smippy na ahịrịokwu ka m wee nyefee ya okwu mgbasa ozi mmekọrịta m ogologo oge. 🙂